Ny fitsipiky ny fiasan'ny kolo koloid dia ny fikolokoloana volo sy ny fikoropahana haingana. Ny fikosoham-bary dia miankina amin'ny fivezivezin'ny volo-nify roa, ny iray mihodina amin'ny hafainganam-pandeha ary ny iray hafa mijanona, hany ka ny fitaovana mandalo ny faritry ny nify dia iharan'ny herin'ny herinaratra sy ny herin'ny fikorontanana. Mandritra izany fotoana izany, eo ambanin'ny asan'ny hery saro-pantarina toy ny fihoaram-pahefana haingam-pandeha sy ny vortex haingam-pandeha, ny fitaovana dia azo aparitaka, ampiarahina, hotorotoroina ary homogenized.
JINGYE Colloidal Mill dia karazan-fitaovana ho an'ny fikosoham-bary tsara ny tsiranoka sy ny semi-fluid.
1. Indostrian'ny sakafo: voanjo, sesame, ice cream, crème, jam, ranom-boankazo, soja, soja, paty, ronono voanjo, ronono proteinina, ronono soja, vokatra vita amin'ny ronono, sns.
2. Zava-mahadomelina isan'andro: paosy nify, detergent, shampoo, poloney, kiraro tarehy, fotony fandroana, savony, balsama, sns.
3. Indostrian'ny simika: loko, loko, loko, fonosana, menaka manosotra, diloilo, solika diesel, cataly solitany, asphalt namboarina, adhesives, detergents, plastika, plastika nohamafisin'ny fibre vera, hoditra, emulsification, sns.
1.Model: andian-dahatsoratra JYJML, karazana mitsangana; JYJMF, karazany misaraka;
4. Fahaiza-manao: 0.01-1t / h;
5. hafainganam-pandeha: 2800rpm;
6. Function: emulsification, dispersion, homogenization & crushing;
1.Ny masinina dia mandray fitaovana vy tsy misy fangarony, mifanaraka amin'ny fenitra GMP, hiantohana ny fiarovana ny sakafo sy ny fahasalamana.
2.Ny fahombiazan'ny asa azo antoka, ny fanaparitahana ny hafanana tsara, dia mety hitoto tsara, hahazoana antoka fa ny fahamendrehan'ny vokatra dia mifanaraka amin'ny takiana.
3.Ny famolavolana vokatra dia tsara tarehy, tsotra ny fandidiana, mora ny fanadiovana, miteraka fahombiazan'ny famokarana avo kokoa ho an'ny mpanjifa.
Fanodinana ny fahamaotinana
Teo aloha: Fryer